गृहिणीको बाध्यता- ‘श्रम आफ्नो– मूल्य अर्कैको ! – Nepal Japan
नेपाली समय : 01:46:24
जापानी समय : 05:01:24
गृहिणीको बाध्यता- ‘श्रम आफ्नो– मूल्य अर्कैको !
3 December, 2019 17:08 | जन सरोकार | comments | 34050 Views
“बिहे गरेदेखि नै म बिहान ४ बजे उठेर घरधन्दा सकेर श्रीमान्सँगै हस्तकलाको सामग्री बनाउने गरेको छु । श्रीमानसँगै श्रम गर्नुपर्छ, तर मैले मेरो श्रमको मूल्य कहिल्यै पनि ‘चाख्न’ पाइन्, आफूलाई मनमा लागेको ठाउँमा एक पैसा पनि खर्च गर्न पाइन, यतिसम्मकी छोराले विद्यालयबाट फर्केर खाजा खान पैसा माग्दा मसँग छैन, बुबासँग माग भन्नुपर्ने अवस्थामा छु ।
“म लामो समयदेखि घरेलु श्रमिकका रूपमा काम गर्दै आइरहेको छु । घर पुछ्ने, कपडा धुने काम गर्नुपर्छ । बिहानैदेखि रातिसम्म काम गर्ने गरेको छु । गतवर्षको घटना हो, पुसको महिना बिहानदेखि मध्याह्नसम्म एउटा घरमा कपडा धुने काम गरेको थिएँ । कपडा धोइसकेपछि घरवालाले जम्मा रु ३०० दिए । पुसको चिसोमा हात कठ्याङ्ग्र्याउँदै काम गरेको मूल्य खोई ? जति काम गरे पनि मेरो मालिकले मेरा श्रमको मूल्य निर्धारण गर्ने गर्छन् । यो कत्तिको न्यायोचित छ ? दुःख मेरो, ज्याला तोक्ने अधिकार अर्केको ?”
“लामो समयदेखि निर्माण श्रमिकका रूपमा काम गर्दै आइरहेकी छु । पुरुषले जत्तिकै काम गर्नुपर्छ । काममा कुनै फरक छैन । पुरुषले जत्तिकै परिणाममा काम गर्नुपर्छ । काम गर्न पनि सक्षम छु । सीप सिकेको छु । तर मलाई पुरुष श्रमिकलाई भन्दा कम ज्याला दिइन्छ । पुरुष मजदूरले दैनिक एक हजार ज्याला पाउँछन्, तर सोही काम गर्ने हामी महिलालाई दैनिक रु ७०० मात्र दिइन्छ । समान काम तर लिङ्गका आधारमा ज्यालामा विभेद किन ?”
यहाँ प्रस्तुत प्रतिनिधिमुलक भोगाइ लामो समयदेखि आफ्नो श्रमको मूल्यमाथि अर्काले प्रभूत्व जमाउँदै श्रम शोषण र विभेदमा परेका महिलाको हो । श्रमिक महिला अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील होमनेट नेपालले आज राजधानीमा आयोजना गरेको ‘महिलाको श्रमको सम्मान’ विषयक गोष्ठीमा सहभागी महिला श्रमिकले आफूहरूले श्रमको उचित मूल्य प्राप्त गर्न नसकेको, लिङ्गका अधारमा ज्यालामा विभेद हुने गरेको तथा सम्पत्ति तथा आम्दानीमा श्रीमान्को हैकम हुने गरेको बताए ।
सम्पत्तिमा महिलाको अधिकार व्यवहारमा स्थापित हुन सकेको छैन् । अनौपचारिक क्षेत्रमा रोजगारीमा महिलाको सङ्ख्या अधिक रहेपनि सामाजिक विभेद भने अहिले पनि डरलाग्दो अवस्थामा रहेको छ । संविधानले महिला सशक्तीकरणको मुद्दा सम्बोद्धन गरेपनि व्यवहारिकरूपमा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको महिला अधिकारकर्मीको भनाइ छ ।
महिला अधिकारकर्मी रेणु अधिकारीले महिलाको आफ्नो पहिचान, शरीरमाथिको अधिकार र श्रमप्रतिको अधिकारस्थापित हुन नसकेसम्म महिला श्रमिकमाथिको विभेद अन्त्य नहुने बताउनुभयो । “बिहेपछि महिलाको पहिचाननै बदल्ने प्रयास गरिन्छ, महिलाको आफ्नो शरीरमाथिको अधिकार खोइ ?, आफ्नो श्रममाथि महिलाको अधिकार कहाँ सुरक्षित छ ?”, उहाँले प्रश्न गर्नुभयो ।
पछिल्ला दुई दशक कामका सबै क्षेत्रमा महिलाको प्रवेश बढे पनि सरकारी क्षेत्रबाहेक अनौपचारिक, निजी तथा स्वरोजगारमा रहेका महिला श्रमिकको अवस्था अत्यन्त दर्दनाक रहेको उहाँको भनाइ छ । “अहिले पनि महिलाले पाउने ज्यालामा फरक छ, समान कामको समान ज्याला नारामै सीमित छ”, उहाँले भन्नुभयो, “बहुसङ्ख्यक महिला श्रमिक आवाजबिहीन छन्, उनीहरू सामूहिक सौदाबाजीमा उपेक्षित भइरहेका छन् ।” असुरक्षित कार्यस्थल, यौन शोषण र लैङ्गिक हतोत्साहनले श्रमिक महिला अत्यन्त जोखिममा रहेको उहाँले बताउनुभयो ।